aung November 26, 2012 - 7:06 pm အရည်အချင်းမရှိပဲနဲ့ခေါင်းဆောင် မလုပ်နဲ့။ခေါင်ဆောင်ကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်နိူင်ငံပညာရေး စီးပွာရေး ကျန်မာရေးအစစအရာရာကောင်အောင် တိုးတက်အောင်လုပ်ရတာ ။ရောင်းရသမျှသယံဇာတငွေတွေကို ကိုယ်အိတ်ထဲကို ထည့်တာမဟုတ်ဘူး။ အခုချိန်ထိနိူင်ငံပိုက်ဆံမက်တုန်းပဲး။
Reply burmathwe November 26, 2012 - 11:57 pm အခုချိန်ထိအရိုးကိုက်ချင်တုန်ဘဲလားအမောင်တို့ ရယ်…နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေလိုအထောက်အပံ့ယူချင်ရင်လည်း အရင်ခိုးထားတာတွေကို နိုင်ငံတကာစံနှုံးနဲ့ ညီအောင် အစစ်ခံလိုက်ပေါ့ …ဘာလဲကုန်သွားလို့ လား…
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 27, 2012 - 3:29 am ပြည်ပတိုင်းပြည်တွေက ထောက်ပန့်ကြေးတွေ ရတော့မယ့် အရိပ်အယောင်မြင်တာနဲ့ စလာကြပြိ။
Reply Oo Thaw November 27, 2012 - 8:54 am Mr. President, Mr. Chairman, Pyithuhluttaw, Mr. Chairman, Amyotharhluttaw,
Reply မင်းမျိုးနိုင် November 27, 2012 - 9:13 amံနေ၀င်းခေတ်ကစပြီးသည်နေ့ထိနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။မင်းတို့ပြော
Reply AKN November 27, 2012 - 9:41 am We understand that these personnel had already enjoyed their first military pensions and not suitable to receive second allowance. They should be fair to the people. However this issue should be decided legally by the Law Makers in the parliament.
Reply oomoe November 27, 2012 - 10:22 am ရှေ့နွား ကဖြောင့်ဖြောင့် မသွားရင်…………
Reply WEI MYO November 27, 2012 - 11:01 am It is expected this retired person (U Than Shwe) will take the country resources with all possible ways and as much he can exploit as possible till death.
Reply Win November 27, 2012 - 12:39 pm Were they voted by The hole Country of People?
Reply yu November 27, 2012 - 2:00 pm Ne Ne Lay Hma MA THa Htar Bu.
Replyှsuzinhtwe November 27, 2012 - 3:32 pm NLD က မသိလို့ မဆွေးနွေးလိုက်ရဘူးပြောတာ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ ပြည်သူတွေက ထောက်ခံအားပေးပြီး NLD ကိုလွှတ်တော်ထဲရောက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ အဲ့ဒီလို မဟုတ်တာလုပ်မဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားထောက်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားကိစ္စတွေကို အားရုံစိုက်နေလို့ မသိဘဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ မဖြစ်ကောင်းပါဘူး။ NLD ဆက်ပြီး ဘယ်လိုယုံရမလဲ။
Reply kachin duwa November 27, 2012 - 4:21 pm လက်ရှိရာထူးသမားတွေကိုတော့ ထားပါ။ အငြိမ်းစားယူသွားပြီးသူများ ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ အငြိမ်းစားလစာ ပေးထားပြီးသားလေ။ မလောက်ဘူး ဆိုရင်လဲ လွတ်တော်မှာ တရားဝင်တောင်း။ နိုင်ငံတော်မှာ လောက်အောင် မပေးနိုင်ဘူး ဆိုရင်လဲ ခံယုံပေါ့။ ဒင်းတို့ ဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင် လုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍပဲ။ တန်သင့်သလောက်ယူပေါ့။ ကြားလို့မှ မကောင်း။
Reply mg mg u November 27, 2012 - 6:31 pm Whatever,,I think we should make some consideration about it in Parliament.
Reply ပါကြီးဖိုး November 28, 2012 - 2:57 am ရာထူးရှိစဉ်က ထားစရာမရှိလောက်အောင် ခိုးထားကြပြီးကာမှ အခုအချိန်မှာတောင် အိမ်အကူအတွက် အသုံးစရိတ်ကို လွှတ်တော်မှာ တောင်းတယ်ဆိုပါလား… မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများလည်း ဦးခင်ညွန့်လိမ်နည်းကို သုံးပြီး သစ်ခွပန်းတွေရောင်း၊ အိမ်မှာ ရှိတာလေးတွေ ထုတ်ရောင်းကြရမယ့် အခြေ ဆိုက်ရတော့မယ့်အကြောင်း…ဒါမှမဟုတ် အခြားနည်းတွေနဲ့ ဗြောင်လိမ်ကြတော့မယ် ထင်ပါတယ်။ နအဖ အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ အပါအ၀င် အငြိမ်းစား ပုဂ္ဂိုလ် ၇၀ တို့ဟာ အရှက်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့ ထိပ်ခေါင်သရဖူ ဆောင်းထိုက်ကြပါတယ်။
Reply HaHa November 28, 2012 - 3:19 am “ပြောပြန်ရင်လည်း အောင်မင်းလွန်ရာကျမယ်”
Reply pnwara December 3, 2012 - 1:19 pm ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ- အနော်တို့ က တရုပ်ကိုလဲကြောက်ရတယ်လို့အကြောခိုင်းတာလားဂျ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 28, 2012 - 4:03 am အဓိပ္ပါယ် မရှိတာ၊ နိုင်ငံဘဏ္ဍာနဲ့ ပေးရမယ်လို့။ ကိုယ့် အိမ်မှာ ခိုင်းဘို့ ခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်သမား ကိုယ့်ဘာသာ ပေးရမှာပေါ့။ မပေးနိုင်ရင် မထားနဲ့၊ ကိုယ်တိုင် ထလုပ်။ ပေးနိုင်ရင် တရာမက ခေါ်ထား။ ဘယ်သူမှ သောက်ရေး မလုပ်ဘူး။
Reply aung November 28, 2012 - 11:04 am ဥပဒေမှာပြဌါန်းထားတာရှိရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ ၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဥပဒေထက်မှာ မည်သူမှမရှိဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းဘဲဖြစ်သင့်ပါတယ် ၊ မလုပ်မရှုပ်မပြုတ် ဒီအတိုင်းဆက်သွားနေရင် ဒီအတိုင်းဘဲဖြစ်မှာပါ။
Reply Thinn Thinn November 28, 2012 - 11:56 am “Insein Prison” is always open for them. They can rest there without worrying for any bills…
Reply thuratun November 29, 2012 - 10:13 pm အဲဒိသူတွေဟာ ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလား၊ သူတို့ခိုးယူခဲ့တဲ့
Reply thihamin December 1, 2012 - 11:36 am သန်းရွှေ၊ မောင်အေးးနဲ့အပေါင်းအပါတွေကို နောက်နောင်ကို ထောက်ပံ့ငွေကြေး အလီလီပေး စရာမလိုအောင် တခါထဲ အပြတ် လားပင်စင်သာပေးလိုက်ပါတော့။
Reply htut January 18, 2013 - 9:12 pm ဒီလူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့လွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီးလွတ်လပ်ရေးဖခင်ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့ကြမတင်ပြဘူးလား..ဟဟ..၁၀သက်စားမကုန်အောင်ရှိသားနဲ့တောင်းစားချင်သေးတယ်..ပြည်သူ့ပိုက်ဆံကို..သောက်ရှက်ကိုမရှိတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့..
Reply kat January 20, 2013 - 1:59 pm ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအတွက် ပင်စင်က ၁၀ သန်း၊ ဆုငွေက သန်း ၂၃၀၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ပင်စင် ၈ သန်း၊ ဆုငွေ ၁၈၄ သန်း ပေးခဲ့ပြီးပြီလေ။ နိုင်ငံက မသေမချင်း ဆက်တာဝန်ယူနေရဦးမှာလား